Apple inobvisa iyo AirPlay 2 basa kubva kune yazvino beta yeiyo iOS 11.3 uye tvOS 11.3 | IPhone nhau
Maawa makumi maviri nemana mushure mekuburitsa iyo yekuvandudza 24 yakagadzirisa bhagi rechiratidzo cheIndia Tegulu, vakomana veCupertino vakatanga nezuro beta nyowani yeIOS 11.2.6, kunyanya iyo beta yechitatu, beta iyo mukufungidzira isu yakapa mhinduro kuma reboots akakonzerwa neichi chiratidzo cheIndia.
Ruzivo rwekutanga rwunotiunzira beta rechitatu reIOS 11.3 uye tvOS 11.3 inowanikwa mukutsakatika kweiyo AirPlay 2 basa, basa rinotibvumidza kuburitsa mutinhimira mumwechete pazvinhu zvakasiyana uye zvaive imwe yemitambo mikuru yeiyi huru inotevera yekuvandudza.
Kutenda kuAirPlay 2, tinogona kuridza mimhanzi pamaApple TV maviri akasiyana panguva imwe chete, kana pamaPodPod maviri kana anopfuura akapararira pamba pedu (kunyangwe zvisiri panguva ino nekuti basa rema multiroom harisati raitwa). Iyo Apple TV yakaonekwa mukati meChikamu cheImba uye ikatiratidza sarudzo yeku Sarudza pane iyo imba yataida kuburitsa zvirimo mumhanzi uyo wairidzwa pane yedu iPhone, iPad kana iPod touch.
Senguva dzose, hatife takaziva izvo zvave zviri zvikonzero nei Apple yabvisa basa iri, asi hazviite chero pfungwa kunze kwekunge iwe wakamanikidzwa kubvisa chimiro kubva pane inotevera gadziriso kuti uibudise mune ramangwana shanduro dzeIOS. Sekutaura kwakaita Apple payakaunza tekinoroji iyi, kuvhurwa kwayo kwaizoitika mukati megore rino, saka zvingangoita kuti isu tichiri kumirira.
Zvichida chikonzero nei Apple yabvisa basa iri hachisi chimwe kunze kweku kunatsiridza mashandiro isati yaburitswa vhezheni yekupedzisira, kudzivirira kuti iyi tekinoroji inotanga kupa matambudziko ekushanda uye kuti zvakare iyo Cupertino-yakavakirwa kambani iri pamiromo yemunhu wese kune ayo gaffes mukugadzira software.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Apple inobvisa AirPlay 2 chimiro kubva yazvino beta yeiyo iOS 11.3 uye tvOS 11.3
La Berta Sr. Ignacio La Bertaaaaaa kubva kuIOS